» भिमफेदी गाउँपालिका ऐतिहासिक गाउँपालिका हो– राना
२०७५ कार्तिक १८,आईतवार १५:२६
भीमफेदी गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष निर्वाचित हुँदा के कस्ता समस्याहरु थिए ?
-बाटोघाटोको असुविधा, गुणस्तरीय शिक्षाको समस्या, स्वास्थ्य उपचारको अभाव, मानिसहरुमा जनचेतना तथा तालिमको कमी, उत्पादन भएका चिजबिजहरुले बजार र उचित मूल्य नपाउनु, आर्थिक, भौतिक, सामाजिक स्तरमा पनि सम्भावना भएर त्यति विकास हुन नसकेको अवस्था थियो । अब बिस्तार हामीले गाउँपालिकाको नीति तथा योजनाका कारण यि सबै कुराहरुमा क्रमिक सुधार भइरहेको छ ।
विकास र निर्माणका कामहरु कसरी अघि बढीरहेका छन् ?
–विकास भन्ने वित्तिकै भौतिक पूर्वाधारहरु बाटो, पुल निर्माण, भवन निर्माण जस्ता कार्यहरु बुझिन्छ तर हामीले सामाजिक र आर्थिक परिवर्तनहरुका लागि पनि काम गरिरहेको छौं । मूलबाटो जोड्ने ३ वटा बाटो निर्माण गरिरहेका छौं, प्रत्येक वडा–वडामा प्राथमिक स्वास्थ्य इकाई राख्ने, शिक्षामा सुधार ल्याउन बाल केन्द्र देखि नै अंग्रेजी माध्यमको पढाई सुरु गर्दछौं । लक्षित वर्गलाई बजेट छुट्याएर महिला, दलित, अपाङगता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक, जनजातिको हकमा काम गर्दै आएका छौं ।
तेस्रो गाउँसभा समेत भइसकेको छ । माथि उल्लेख गर्नु भएको बाहेक के–के योजनामा काम गरिरहनु भएको छ ?
–हामीले शिक्षा क्षेत्रलाई अगाडी बढाउन सुपिङ स्कुलमा बालि विज्ञान र महेन्द्र माविमा सिभिल सब–ओभरसियर शिक्षा प्रदान गर्ने कार्य गर्दै आइरहेका छौं । हामीले गाउँमा फुल खेतीलाई पनि जोड दिइ काम गरिरहेका छौं ताकी हाम्रो पैसा अन्त नजाओस् भनेर हो । फुल खेतीबाट पनि गोटाको १ देखि ३ रुपैयाँसम्म आम्दानी हुन्छ । यसैगरी कृषिमा तरकारी खेती, फलफुल खेती विषादी रहित होस् भन्ने कुरामा हामीले जोड दिँदै आएका छौं । महिलाहरुलाई सिपमूलक तालिमको व्यवस्था गरेका छौं । पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा झर्ना व्यस्थापन, पिकनिक स्पोर्ट, बन्जीजम्प निर्माण कार्य पनि हाम्रा योजना भित्र पर्दछन् ।
कर्मचारी व्यवस्थापनको पाटो कस्तो छ ?
– वडा सचिवहरु छन् तर कार्यालय सहयोगीहरुको अभाव छ । निजामती कर्मचारीहरु पनि पर्याप्त छैनन् । बिषयगत काम हेर्ने कर्मचारीको अभाव छ । हामीले माग गरिरहेका छौं । छिट्टै नै व्यवस्थापन हुन्छ होला ।
कर्मचारी अभावको कारण के हो ?
–सुगम ठाउँमा कर्मचारीहरु जान, बस्न रुचाउँछन् जस्तै काठमाडौं, हेटौंडा र १ दिनमै फर्कन सकिने ठाउँमा पनि कर्मचारी जान्छन् तर दुर्गम ठाउँहरुमा कर्मचारी त्यती जान रुचाउँदैनन्, त्यसैले होला कर्मचारी अभाव भएको । -प्रस्तुती जी. न्यौपाने